ဘဝဒဿ န ပန်းချီကားချပ် (၁)
ရုပ်တွေရှင် နေတဲ့ ရုပ်သေ တွေရဲ့အပြင် ဘက်
ကွယ်လွန်မြစ်တစ်စင်းရဲ့  ရင်တွင်းနံရံ
ဗိုလ်အောင်ကျော်ရာပြည့် ကာတွန်း ပြပွဲ၁
ဘဝ အတွေ့အကြုံ Latest
မ ပ (အပိုင်း၁)
မိုက်တွင်း နက်နက် နှစ်ခါပြန် တူးခဲ့သူ
ဒီကဗျာ ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ရေးတော့မှာလား
ဟာစရီပါး လို ငါ့အစ်ကို
ေ အာင် ဆ န်း(သူ့အောင်မြင်ပုံဟာအဆန်းတကြယ်)
ဖူးဖူးသက်ရဲ့အင်တာနက် မိတ်ဆက်စာမျက်နှာ
NEOရယျ ဘာတှကေို ဘယျလို မူးယဈရမလဲ
" ငယ်တုန်းက ဘဝတွေ လွမ်းလို့ "
အယ်လ်ဖရက်ဒို၊ ဆယ်လ်ဗာတို၊ကိုမြင့်သန်းနှင့် ငွေရောင်ပိတ်ကားပေါ်မှ အတိတ်ပုံရိပ်များ
နိုင်ငံတော်သီချင်းကို သီဆိုပိုင်ခွင့်မရှိသောနိုင်ငံ သားများ
" အဓိပတိလမ်းပေါ် လျှောက်ဖူးခဲ့ပါသည်
MPP ရဲမြင့် ထံလာခဲ့သော ဗင်ဂိုး မှ အစုပြု ၍
" ဆင်စခန်းက ပြန်ခဲ့တယ်"
ဘ၀အ​မော​တွေထဲ ​ငေး ​ငေး ​မောခြင်း
မြောက်ပိုင်းပြန် ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲဘော်ဟောင်း မောင်ငယ်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ဓါတ်ခဲရဲ့ ဖခင်သို့ ခွန်နစ်စဉ်အလွမ်း
‘ကလောင်ကိုဖက် ဖောင်ကို ဖျက်၍…’
သမဂ္ဂ အဘဦးအုန်းမြင့် (သို့မဟုတ်) ကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့ လူကြီးလူကောင်း တယောက်အကြောင်း
Written by kaungkin	Created on Thursday, 13 September 2018 15:02
" "အမ်းမရိတ်လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်တစင်းတွင် ရောဂါပိုးဝင်၍ ခရီးသည်များ နာမကျန်းဖြစ်""အလို ဘယ့်နှယ်ဖြစ်တာတုန်း " သတင်းစာနောက်ကျောက်က သတင်းခေါင်းစည်း စာတန်းကို မြင်တော့ ဒေါ်မြသီရိ တယောက် ရယ်ချင်...
Written by မင်းအောင်မြင့် ( ရာမည)	Created on Saturday, 19 November 2016 11:42
အစေးမကပ်တဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲတွေ ပြန့် ကျဲနေသလို အစိုးမရတဲ့ စိတ်အတွေးတွေက ဟိုတစ်စဒီတစ်စလကမ္ဘာရဲ့  ချောက်ကမ်းပါးမဟုတ်မြေကမ္ဘာရဲ့  ဆွဲငင်အားနည်းခြင်းရဲ့  ပြယုပ်ကတ္တရာတွေ အရောင်ပြယ်နေလို့ ပါ ။ ပလတ်စတစ်အိတ်တွေ လေရူးနဲ့ ကခုန်ရေသန့် ဗူး ဘီယာဗူးအိုးခွက်စုတ် အဟောင်းထုတ် အစုတ်ပလုတ်တွေအခြေမဲ့ အကြွေပန်းခြောက်လေးတွေဟို...
Written by ခိုင်ခိုင်စေလွင်	Created on Saturday, 12 November 2016 02:33
နာရီမပတ်ပဲ နေခဲ့တဲ့ နှစ်တွေ ပြန်ကြည့်လိုက်တာ ငွေရတု သက်တမ်းတောင် ရောက်နေပါပေါ့လား။ ကျမက နာရီပတ်ရတာ မကြိုက်၊ အခုနောက်ပိုင်း နာရီနှင့်ပင် မတည့်တော့ပေ။ နာရီပတ်တာ မကြိုက်ပေမယ့် မဖြစ်မနေပတ်ခဲ့ရတဲ့ ကာလတွေ ရှိခဲ့သည်။ နာရီမကြိုက်တဲ...
Written by မိုးသက်ငြိမ်ဦး	Created on Thursday, 03 November 2016 17:32
စခန်းရောက်မှရှင်း ဆိုတာရဲ့နောက် ထပ်မတွေ့ရတော့ဘူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်နေကျအတိုင်းပဲ လုပ်ရပါလိမ့်မယ် ဆိုတာလက်သုံးစကားမှန်းသိသိကြီးနဲ့ မင်သက်မိသွားငါဘာလို့ မတားဆီးလိုက်နိုင်တာလဲ ငါဘာလို့ မကာကွယ်လိုက်နိုင်တာလဲ ငါဘာလို့..ငါဘာလို့...။အမှန်တရားကိုယုံကြည်လွန်းနေတော့ ...အမှန်တရားကပြန်လှည့်ကြည့်ပါ့မလား.. သံ...
Written by kaungkin	Created on Thursday, 03 November 2016 17:29
Written by ရန်လင်းအောင်	Created on Wednesday, 02 November 2016 16:06
ဗီရိုထဲမှာ စာအုပ်တွေရှိတယ်နံရံမှာ ပန်းချီကားတွေချိတ်ထားတယ်CDချပ်ထဲ မှတ်ပုံတင်မေ့ကျန်ရတယ်လို့ လည်ချောင်းသံအက်အက်နဲ့အလ္လာဘ သလ္လာဘတွေဆက်ပြောလို့ ကုန်ရုန်းပြီးခုံးခုံးထလာတဲ့လေကြောင်းလွှာအံ့သြစရာမရှိပါ ။ လူပျောက်ကြော်ငြာတွေကလူပျောက်ကြော်ငြာတစ်ခုကိုစိမ်ပြေနပြေ ထိုင်ရေးနေတယ်လူသေမှုတွေကလူသေမှုတစ်ခုကို အော်ဖ...
Written by ဂိုးဂိုး(မောရမြိုင်)	Created on Wednesday, 02 November 2016 16:03
အသက်ရှင်ဖို့မိုးတစ်ခုလုံးစာ ဆာလောင်နေခဲ့လည်းရေအမှုန်အစတွေနဲ့နေတတ်ခဲ့ပြီးပြီအသက်ရှင်ဖို့မြေတစ်ခင်းလုံးစာအိပ်မက်နေခဲ့လည်းလက်တစ်ဆုပ်စာခဲကြမ်းတွေနဲ့နေတတ်ခဲ့ပြီးပြီအသက်ရှင်ဖို့အသက်ဆက်ရှင်နိုင်ဖို့ဒုက္ခတွေ အထပ်လိုက်ထမ်းထားရပါစေသူတို့ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရေလိုငတ်တယ် ။ ။ ဂိုးဂိုး...
Written by မိုးသက်ငြိမ်ဦး	Created on Monday, 24 October 2016 12:07
ရွှဲနစ်နေတဲ့အချဉ်ရည်ထဲကစိတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့စိတ်တစ်ခုလုံးဟာအချဉ်ပေါက်နေတယ်အချဉ်ပေါက်နေတဲ့စိတ်မှာလူ့အသက်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး..မင်းလိုကောင် စောက်ငရဲကို ဒိုးတော့..ဆိုပြီးမျက်ခွက်တစ်ခုလုံးစုတ်ပြတ်သွားအောင် ငါဟာ ဓားနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ထိုးနေမိတယ် ...မင်းငါ့ကိုသတ်ချင်နေတာလား..သတ်ကွာ..သတ်ကွာ..တိုင်နဲ့ခေါင်းန...
Written by ဒီလူည	Created on Monday, 17 October 2016 16:25
ဝါကျရဲ့အပြင် ဘက်ကို ဇန်နီထွက်သွားတယ်ပိတ်ထားတဲ့လိုင်းတချို့ဟာ ရေဒါထဲမှာ ပွင့်နေတယ်အဆာ အဆိပ်သင့်နေတဲ့ အသံဖြစ်ပေါ်ရာ ပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်မှာယမ်းအ နေတဲ့ အရိုးတွေက ၂၀၆ ချောင်းဇန်နီ သောက်နေတဲ့ ရေထဲက ဆားတွေကို ခပ်ထုတ်လိုက်တယ်ကတ္တရာ လမ်းတွေပေါ် ယာဉ်တွေဖြတ်သွား တိုင်းဝတ်ထားတဲ့ နာရီက အ ရောင် တွေမှိန်လာတာကိုဇန်နီ...
Written by ရတုသွေး ။ ဇေသော်(စကားဝါမြေ)	Created on Monday, 17 October 2016 16:18
စိတ်ရောင်စုံလူရောင်စုံကစားစရာ အစုံစားစရာ အစုံပျော်ကြ မောကြဒီလိုအခင်းအကျင်းမှာကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ မျှားပေါက်သူကြက် ဆင် ကျား ပုဇွန် လိပ် ငါး ပေသီးလိမ့်သူခြောက်ကောင်ဂျင် ထိုးသူကွမ်းစားသူနဲ့ ကွမ်းထွေးသူရပ်ကြည့်သူနဲ့ရွေ့နေသူများပွဲတဲ့ လူနဲ့ လေနဲ့တင်လမ်းမတွေ လုံးပါးပါးခဲ့ရပုံ။ ။ -----------------...
Written by မင်းအောင်မြင့် ( ရာမည)	Created on Friday, 07 October 2016 17:06
အလွမ်းလှိုင်းတွေတံလျှပ်နဲ့ ထပ်တူကျ ။အဆွေးရိပ်တွေရိုးတံနဲ့ ကာရန်ချ ။အစိုးမရတဲ့ စိတ်တွေလေလွင့်လို့အတွေးတွေဖွ ။ ပြိုမလို တိမ်ထူကြားမှာဟာတာတာနယ်ချဲ့လို့ . . . .။အရိပ်မဲ့ နှလုံးသားပက်ကြားအက်အဆင်ရင်လွင်ပြင်တစ်ခုတည်းသာ. . . .(ကျွန်တော်ရဲ့  )ခိုနားရာ ရှင်သန်ခွင့်တစ်ခုတည်းပါ ။ ။ မ
ဘဝဒဿ န ပန်းချီကားချပ်...
Written by မင်းအောင်မြင့် ( ရာမည)
အစေးမကပ်တဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲတွေ ပြန့် ကျဲနေသလို အစိုးမရတဲ့ စိတ်အတွေးတွေက ဟိုတစ်စဒီတစ်စလကမ္ဘာရဲ့  ချောက်ကမ်းပါးမဟုတ်မြေကမ္ဘာရဲ့  ဆွဲငင်အားနည်းခြင်းရဲ့  ပြယုပ်ကတ္တရာတွေ အရောင်ပြယ်နေလို့ ပါ ။ ပလတ်စတစ်အိတ်တွေ လေ...
Written by မိုးသက်ငြိမ်ဦး
စခန်းရောက်မှရှင်း ဆိုတာရဲ့နောက် ထပ်မတွေ့ရတော့ဘူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်နေကျအတိုင်းပဲ လုပ်ရပါလိမ့်မယ် ဆိုတာလက်သုံးစကားမှန်းသိသိကြီးနဲ့ မင်သက်မိသွားငါဘာလို့ မတားဆီးလိုက်နိုင်တာလဲ ငါဘာလို့ မကာကွယ်လိုက်နို...
Written by kaungkin
Written by ရန်လင်းအောင်
ဗီရိုထဲမှာ စာအုပ်တွေရှိတယ်နံရံမှာ ပန်းချီကားတွေချိတ်ထားတယ်CDချပ်ထဲ မှတ်ပုံတင်မေ့ကျန်ရတယ်လို့ လည်ချောင်းသံအက်အက်နဲ့အလ္လာဘ သလ္လာဘတွေဆက်ပြောလို့ ကုန်ရုန်းပြီးခုံးခုံးထလာတဲ့လေကြောင်းလွှာအံ့သြစရာမရှိပါ ။ ...
Written by ဂိုးဂိုး(မောရမြိုင်)
Written by ထိန်လင်း
မဲဇလီကုန်း တမနက်မှာ သက်သက်က နင်ကဗျာရေးပြီး တင်အောင်ကျော်ဆီ ပို့လိုက်ဦးနော်တဲ့ လမ်းဘေးက လယ်ကွင်းစိမ်းစိမ်းတွေတရိပ်ရိပ် ငါ့စိတ်ဟာ ဆယ့်ခြောက်နှစ်သားလေး လိုတော့ မပြေးလွားနိုင်တော့။ သစ်တရွက်ေ...
Written by ပိုင်
၀၀း၄၂ ကမ္ဘာကို ဘုရားသခင်အစား ‘ငါ’ လာခဲ့တယ် ၀၀း၄၁ ငါဟာ ငါ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ ဘုရားသခင်ကိုသာလက်ခံနိုင်ပြီး ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ အရာတိုင်းကို လက်မခံနိုင်၍ ကော...
Written by မင်းနဒီခ
(၁) လူဟာ မီးကို စတင်တွေ့ရှိတာ ကံကောင်းတယ် ဒီထက်ပိုလို့ အချစ်ကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာလည်း ပိုကံကောင်းတယ် ဒါပေမဲ့ စစ်ကို စတင်တွေ့ရှိလိုက်တော့ အားလုံး ကံဆိုးတော့တာပဲ (၂) တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ မီးအတွက်စစ် ...
Written by လူဆန်း
ကဗျာရှေ့က စကား ဒီနေ့ဟာ ၈ ရက် ၈လ ၈၈ ကိုအလေးအနက်ဖြတ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့မျိူးဆက်တွေအတွက်တော့ ဒီနေ့ ၁၂။ ၁၂။ ၁၂ ရက်ဟာလည်း တခုခုတော့ အခြားနေ့တွေထက် ထူးနေသလိုလိုပါဘဲ။ဒီနေ့ ဟာကမ္ဘာပေါ် က ဘယ်နိုင်ငံသားတွေအတွက် မထူးခြ...
တစ်ခါက ကြေးနီရောင်ဆံပင်တွေနဲ့ အင်ဒီးယန်းမလေးလိုလှတဲ့ မင်းဟာ ခုတော့ တိုတိုလိပ်လိပ်ဆံပင်နဲ့ ပါရီသူလေးလိုလှနေပြန်ပြီ မင်းဟာ အင်ဒီးယန်းမလေးလိုလှပေမယ့် အမေရိကန်မလေးတော့ မဟုတ်ခဲ့ မင်းဟာ ပါရီသူလေးလိ...
Written by ဂျေးမ်စ်ဘန်း/ ဇေယျာလင်း
(၁) ပထွေးရဲ့ မရောင့်ရဲနိုင်တဲ့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမှုကိစ္စကော ပြီး၊ မိုးရေကို စေးကပ်စေတဲ့ သူမရဲ့ သုတ်လိမ်း ကော့စ်မက်တစ် ပြီး၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းကို ကူးစက်စေတဲ့ ဘာဟီရတွေရဲ့ အဖါအထေးကွက်တွေ ...
​ပွင့်လင်းမြင်သာ ပြည်မြန်မာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ တိုက်ဖျက်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှု
Written by မောင်နေလင်းအောင်
​ရတနာမြတ်သုံးပါးနှင့် မိဘ၊ ဆရာ၊ မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟတို့၏ ကျေးဇူးကြောင့် ပွင့်လင်းမြင်သာ ပြည်မြန်မာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ တိုက်ဖျက်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှု ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို အောင်မြင်စွာ စတင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ရှေးဦးစွာ အသိ...
ခရမ်းပြာထက်လူအား ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ"
Written by ထူးညို
- ကဗျာဆရာ ခရမ်းပြာထက်လူ ကို Path Finder Group (ပဲခူးမြို့)မှ ဂုဏ်ပြုသည့် အခမ်းအနားတစ်ရပ်အား ပဲခူးမြို့၊ ဂရင်း(ဒ်)ဆိုရှယ် ခန်းမတွင် (၈၊ ၁၁၊ ၂၀၁၃) နံနက် (၈)နာရီမှ နေ့လည် (၁၁) န...
မောင်ကျပ်ခိုး ၀တ္ထုများ ထွက်တော့မည်
ကောင်းကင် မဂ္ဂဇင်း ပေါ်က ပင်တိုင် ၀တ္ထုတို စာရေးဆရာ မောင်ကျပ်ခိုး ရဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ လှဝင်းရီ အပါအ၀င် ဇင်မာဦး နဲ့ ပန်ဒိုရာ စိန်...
အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား တောင်ငူမြို့ တွင် ကျင်းပ
Written by ရလအ
ဇူလိုင် (၁၉)ရက်နေ့ တွင် ကျရောက်သော (၆၆) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် (၉)နာရီအချိန်တွင် တောင်ငူမြို့ မိုင်ဒါကွင်း အာဇာနည်အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင် မြက်ခင်းပြင်ကျယ်၌ က...
“အေးကို သို့မဟုတ် အဇ္ဈတ္တ အလှတရားကို ရှာဖွေသူ”
အနုပညာလောကထဲမှာ ဆယ်စုနှစ်သုံးစုနီးပါးဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝ၊ သူဖြတ်သန်းခဲ့ ရတဲ့ အချိန်ကာလနဲ့ခေတ်စနစ်၊ သူ့ရဲ့ အနုပညာရပ်တည်ချက်နဲ့ သူဖန်တီးတဲ့ အနုပညာ...
(၇) ဇူလိုင် အခမ်းအနား တောင်ငူမြို...
Written by လေးကျွန်းမြေ - တောင်ငူ
(၅၁) မြောက် - ၇ ဇူလိုင် - အထိမ်းအမှတ်နေ့ အခမ်းအနား နှင့် ကေတုအိုးဝေစာကြည့် ဖွင့်ပွဲ ကို တောင်ငူမြို့  ၊ မင်ကြီးညို ရပ်ကွက်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆ...
ဆူညံသော ဝန်ချီစက် ကဗျာစာအုပ်မိတ်ဆက်
ကဗျာဆရာ ဘိုလ်သိန်းစီစဉ်ထုတ်ဝေတဲ့ ဆူညံသောဝန်ချီစက် အမည်ရတဲ့ ကဗျာစာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲကို ဒီနေ့မနက်က(ဇွန် ၂၅) မန္တလေးမြို့ နန်းတော်ရှေ့ မိသားစုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ကျင်းပခ...
Making new Myanmar , Solo Show.
အမြဲတမ်း အနုပညာ အသစ် အသစ်တွေ ကို တစိုက်မတ်မတ် ဖန်တီးတတ်တဲ့ ခေတ်ပြိုင် အနုပညာရှင် မြတ်ကျော့ ဟာ မြန်မာ အသစ်ပြုလုပ်ခြင်း အမည်ရတဲ့ ၁၃ ကြိမ်မြောက် တကိုယ်တော် ပန်းချီပြပွဲ တခုကို ရန်ကုန်မြို့ အမှတ် ၆...
ယူကေရောက် မြန်မာများနှင့် ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံပွဲ
ယူကေရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် လန်ဒန်မြို့ကို ရောက်ရှိလာမည့် ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံပွဲအား လန်ဒန်မြို့ SOAS တက္ကသိုလ်ရှိ Brunei Gallery တွင် ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နေ့လည...
နာမည်ကျော်ပန်းချီဆရာကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ ပန်းချီဝသုန်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာ ယခုအခါငါးနှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဆရာဝသုန်ကွယ်လွန်ခြင်...
"၂ဝ၁၃ ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့၊ အလယ်ရိုးမ ကဗျာဆုပေးပွဲနှင့်
"၂ဝ၁၃ ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့၊ အလယ်ရိုးမ ကဗျာဆုပေးပွဲနှင့် ကဗျာဆရာကြီး မောင်သင်းခိုင်ရဲ့ (၇၃)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အခမ်းအနား" ဆုရ ကဗျာဆရာနှစ်ဦးဖြစ်သော ကိုရွေးနှင့် ဝင်းမြင့်တို့အား ဆုပေးပွဲညက ပျဉ်းမနားတွင် တွေ့ရစဉ်...
ပန်းချီဆရာ မင်းသူရိန်ရဲ့ လေဟာနယ် ၊နေရာလွတ် တင်ဆက်ပြသ
မြန်မာခေတ်ပြိုင်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ပန်းချီဆရာမင်းသူရိန်(ကဗျာဆရာလင်းသဏ်ညီ)၏လေဟာနယ်၊နေရာလွတ် အနုပညာတင်ဆက်မှုကို ရန်ုကုန်တွင်နိုဝင်ဘာ နေ့မှ ၁၈ ရက်နေ့အထိပြသခဲ့သည်။အဆိုပါအနုပညာတင်ဆက်မှုအား အဆင့်သုံးဆ...
" "အမ်းမရိတ်လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်တစင်းတွင် ရောဂါပိုးဝင်၍ ခရီးသည်များ နာမကျန်းဖြစ်""အလို ဘယ့်နှ...
Written by ဝေမြင့်မောင်
၁။ဖောက်ပြန်ရေးသမားတဲ့ ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းလဲ။ဖောက်ပြန်မှုထက်ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ အရာကြီးပဲ။ဒီလိုခေါ်ကြတယ်။ဟိုဘက်အိမ်က လူကို ဖောက်ပြန်ရေးသမားတဲ့။ဝိုင်းပြောကြတယ်။ဘယ်သူ စပြောတယ် ဘာကြောင်...
တောင်ပေါ်ကနေ နွယ်တို့ နေတဲ့ မြို့လေးဆီကို ကြည့်ရတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ထဲ ပြန်ကြည့်ရ သလိုပင်။ ဆောင်းတွင်း မရောက်သေးပေမယ့် ခပ်မှိုင်းမှိုင်း ကြားက မြို့ကလေးကို မြင်နေရသည်။ ဆေ...
နမ္မားပို့စ် နမ္မားမြို့ကလေးက နေ မြို့ပြင်ထွက် တော်စပ်စပ်လေးမှာ မြေနီလမ်းငယ်လေးက ကွေ့ပတ်ပြီး တောင်ကုန်းတွေပေါ် နှစ်ယောက်သား ဆလံကမ္ဘာ ဆိုတဲ့ လမ်းပြတယောက်နဲ့ အတူ စကားတပြောပြော နဲ့ တက်ကြတာပေါ့။နောက်ပိုင်း...
၂၀၁၁ နှစ်ကုန်ကနီး လောက်မှာ ကျွန်တော်ဟာ ကချင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းက ABSDFတပ်ဖွဲ့ တွင်းမှာ ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သန်းကြွယ်သူဌေး နဲ့ လူကက်ဆက် ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါး ၂ပုဒ် စ...
Written by မင်းညွန့်​လှိုင်​
လည်​ဆံ​မွေးတဖွားဖွားခွာအစုံတ​မြောက်​​မြောက်​ဇက်​သတ်​ထားတဲ့တိုက်​မြင်း ။အသစ်​စက်​စက်​ဂျင်း​ဘောင်းဘီ ဒူး​ခေါင်းအပြဲ ။တိတိကျကျဒရမ်​ရိုက်​ချက်​များနဲ့​ရော့ခ်​သီချင်းများ ။မပစ်​​ဖောက်​ရ​သေးတဲ့​သေနတ်​...
(ခုနစ်ပုဒ်) (၁) ကျုပ်နာမည်လား..တုဈင်မေ တဲ့နားသယ်အထက်နား..ဆံဖြူကွက်ကျ...
(Romania နိုင်ငံသား ကဗျာဆရာ Mircea Cărtărescu ရဲ့ Occidentul (The Occident) ကို Adam J. Sorkin နဲ့ Bodgan Ștefănescu က အင်္ဂင်္လိပ်လိုပြန်ထားသောမူမှ ကိုကိုသက် မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထားသော အနောက်တို...
“ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ မိန်းမဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ပဲ ပတ်သက်ခဲ့ပါစေ၊ သူ့ဘဝအတွက် တကယ်အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ မိန်းမကတော့ သုံးယောက်ပဲရှိနိုင်တယ်။ သုံးယောက်ထက် ပိုလည်းမပိုဘူး၊ လျော့လည်းမလျော့ဘူး။” အဖေဖြစ်သူထံမှ ထ...
စင်္ကာပူနိုင်ငံ အနုပညာပွဲတော်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ခေတ်ပေါ်အနုပညာရှင် အောင်ကို၏ “အောင်ကိုရဲ့ရွာ” အမည်ပေးထားသော ပရောဂျက်အနုပညာ ပြကွက်တခုကို ပြသလျက်ရှိရာ ကောင်းကင် ၀ိုင်းတော်သူ သီရိမှ ကိုအောင်ကိုနှင့် တွေ့...
Written by တောင်ပံ
လွန်ခဲ့သော ၁၀နှစ်နီးပါးက ထောင်တွင်းလုပ် တောင်ပံခတ်သံမဂ္ဂဇင်း မှ ကဗျာဆရာရည်မွန် အင်တာဗျူးကို ကောင်းကင် စာမျက်နှာပေါ်တွင် လေလိုရေလိုကဗျာ(၁) အဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ယခုကျန်ရှိနေသော ဒုတိယပိုင်းက...
ရေလို လေ လို ကဗျာဆရာ..
ကောင်းကင် မဂ္ဂဇင်းမှ ရည်မွန်၏ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ငါတို့ဟာ ကဗျာရှည်အား အပိုင်း(၅) ပိုင်းခွဲ၍ တင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ဤကဗျာကိုရေးခဲ့စဉ်ကာလ၊ ကဗျာဆရာရည်မွန်အား ထောင်တွင်းထုတ် မဂ္ဂဇင်း တစ်ခုမှ ခေတ်ပေါ်ကဗျာနှင့်ပတ်သက်...